.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: SWF & FLV Player
ဒီ SWF & FLV Player လေးကို အနော်ရှာတွေ့ထားတာ မကြာသေးပါဘူး။ Flash Song တွေနဲ့ FLV ဗွီဒီယို ဖိုင်တွေကို
ဖွင့်ကြည့် နားထောင်လို့ ရပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက ကိုယ် ဖွင့်လိုက်တဲ့ Flash Song ရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း
ကြည့်လို့လွယ်တယ်။ Flash Song အပုဒ်ရေအများကြီးကို Playlist လုပ်ပြီး တစ်ခါတည်း ဖွင့်နားထောင်လို့ရပါတယ်။
သုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့...။
Posted by Thurainlin at 23:53